Doorashada kuraasta golaha deegaanka Gaalkacyo oo maanta lasoo gaba gabeeyay | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Doorashada kuraasta golaha deegaanka Gaalkacyo oo maanta lasoo gaba gabeeyay
Doorashada kuraasta golaha deegaanka Gaalkacyo oo maanta lasoo gaba gabeeyay
Koofurta magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada 13-kursi oo ka harsanaa dhameystirka 27-ka xubnood ee golaha deegaanka magaaladaas oo muran ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay.
Doorashadaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha Gudaha DG Galmudug Cabdi Waayeel, mas’uuliyiin katirsan maamulka gobolka Mudug & Magaalada Gaalkacyo, waxaana lagu hor doortay 13-ka kursi ee golaha deegaanka.
Xubnaha la doortay ayaa waxa ay dhameystir u noqonayaan 27-ka xubnood ee uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo dhanka Koofurta oo maamul ahaan toos timaada DG Galmudug.
Golahaan ayaa maalinta Isniinta ah todobaadka soo socda kuna beegan 26-ka Oktoobar 2020 dooranaya Duqa Magaalada Gaalkacyo oo ay u tartamayaan musharixiin buuxisay shuruudaha lasoo bandhigay.
Mas’uuliyiin katirsan DG Galmudug & xubno ay kamid yihiin ergada dooratay golaha wakiilada ayaa sheegay in la gacan-bidixeynayo kuraasta qaar oo dano gaar ah laga leeyahay waa sida ay hadalka u dhigeen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel oo ka duulaya dooddaas ayaa tagay koofurta magaalada Gaalkacyo si uu goobjoog ugu noqdo kuraasta qaar ee muranka ka dhashay.